Kana iwe uchifonerana kana kuenda kumisangano uri kure, tora mukana weZoom kuti uzvironge zviri nani uye ubatane nevakawanda vatori vechikamu. Muchidzidzo ichi, Martial Auroy, mudzidzisi ane chitupa uye Microsoft shamwari, anopa chishandiso ichi chekugovana uye misangano chaiyo. Pamwe chete, iwe uchafamba kuburikidza neyekushandisa interface paPC, Mac uye smartphone. Iwe uchaona nzira yekujoinha musangano, kukoka vanhu, kuronga zviitiko, uye kukoka. Nekudaro, iwe uchatora kutonga kwekugovana skrini, kuendesa faira, zvirevo kana vhidhiyo kurekodha kuti uenderere mberi nekuunganidza uye kuchengetedza kuyerera kwakanaka kweruzivo kana kudzidziswa.
Izvo zvakakosha zve Zoom Gumiguru 15th, 2021Tranquillus
VERENGA Vashandi vakaremara: zvitsva zvinopihwa mukushandira veruzhinji
pashureNheyo dzeGoogle Drive
zvinoteveraNyora email mune yehunyanzvi nharaunda